Indawo yabesifazane abamnyama e-Afrika yasendulo - Afrikhepri Fondation
ngomgqibelo, januwari 23, 2021
En Uma uhlolisisa, isithombe kanye nesimo sabesifazane abamnyama emiphakathini yasendulo yase-Afrika abangaphansi kwethonya langaphandle, sithola ukuthi babonwa njengonkulunkulukazi. Owesifazane omnyama nobudlelwano bakhe nale ndoda, emphakathini wase-Afrika wesikhathi se-pharaonic ngakho-ke kufanele ihlaziywe.
Ngakho-ke, kulula ukubona ukuthi ngisho izinsalela bemivubukulo owawudalwe Homo sapiens lokuqala Africanus emhlabeni wonke zifakazela ukutuswa amadoda kwabesifazane abamnyama. Ngempela, lezi zisele ziyizicathulo zabesifazane abamnyama (Venus, unkulunkulukazi wenzalo ...).
Ngakho-ke, siyaqonda ukuthi owesifazane omnyama wayehlonishwa futhi wahlonishwa emphakathini wakhe, okwamvumela ukuba ajabulele ngokugcwele kuye kanye namalungelo afanayo njengamadoda.
E-Afrika yasendulo (IGibhithe / Nubia / Ethiopia)
Owesifazane akagcini nje ngokuchazwa ngokobulili bakhe kodwa nangendlela yakhe yobuNkulunkulu. Nguyena onokukwazi ukunikeza impilo, ukuzala (Messou, Messi). Ngakho-ke imvelo yakhe ejulile iyabaluleka futhi ihlonishwa.
Ngaphandle kwalokho, nguyena okuthi, ebudlelwaneni bakhe nendoda, ajabulele imibono ephindwe kane. Impela ungumama, umakoti, unkulunkulukazi nodadewabo. Sizuze njengefa lokuhlala phansi kanye nematriki, lo mbono wezenhlalo ukhombisa izinhloso ezingokomoya zabantu base-Afrika basendulo:
Ubuningi bokuhlakanipha, iqiniso nokulunga (Maat) ungowesifazane,
Ukuvikelwa kukaFaro kwaphathiswa umNubian, unkulunkulukazi u-Anouket,
U-Isis, wayengumkakhe nodadewabo ka-Osiris,
Umama ukhonjiswe ngombhalo we-hieroglyphic ngenxa yenkinga yokuthi lesi silwane sithatha inzalo yaso.
Ngakho, njengabankulunkulukazi, abantu base-Afrika basendulo babamele owesifazane wabo wegolide (ophuzi, igolide yinyama yonkulunkulukazi) ekufezeni kwabo ubuciko (imidwebo, izithombe, njll ...).
Kuyathakazelisa ukuphawula ukuthi le ndoda ivame ukumelelwa nomkayo, noma ibekwa phakathi komkakhe nonkulunkulukazi (isibonelo sendawo yakubo umuntu obalulekile).
Izincwadi zaseGibhithe zisasivezela ukuthi abesilisa babebanakekela omkabo empilweni yabo yomndeni.
“Amadodana ahloniphayo, amadoda anothando, abazali abanakekelayo futhi abavame ukuzitika kakhulu, babenentshiseko engachazwa njengeyokwenza kahle, ukwenza ubuhle ababebaphethe ngenhlonipho enkulu. Futhi izikhathi eziningi, uma kufanele bakholwe, babeka isibonelo ezizukulwaneni ezizayo ”kugcizelela u-Elisabeth Laffont (Cf. Les livres de sagesses des pharaons, éd. Folio).
Ngakho, emphakathini yamandulo yase-Afrika ayikho ngaphansi kwethonya angaphandle, lo wesifazane wabonakala njengoba complementarity yomuntu, wekhaya, le samuntu ubuhle isifazane, umthombo ukuzinza nokuhlakanipha, umthandi yokudala, udade waxwayisa, umfutho wokuziphendulela, umama onakekelayo kanye nonkulunkulukazi wezulu wesikhathi esizayo.
Ukuqhamuka kobungani bobudlelwano bayo nendoda kwaveza umgomo wokumelwa kwentombi nengane (NB. Izethulo zikaIsis oncelisa indodana yakhe uHorus, zingama-archetypes ezethulo zentombi uMariya encelisa usana uJesu) kanye uZiqu-zintathu: ubaba, umama, ingane (ozoba yimiphakathi yaseNtshonalanga yokufuduka: ubaba, indodana noMoya oNgcwele (umama usenyamalele).
Akukho msebenzi noma insimu yokutadisha ivunyelwe abesifazane. Ngakho, emlandweni Afrika bathola abesifazane odokotela (Pesechet), uFaro (hatchepsout), iNdlovukazi (Nzinga), induna yempi? (Amani Renas) UNgqongqoshe wezangaPhandle (Tiye), etc ... Inkosi uqondisa nge owesifazane ngubani odlala indima yomeluleki (umfazi, umama).
Emibonweni yenkolo yase-Afrika, uNkulunkulu uthanda owesifazane njengomuntu. Umbhangqwana oshadile bese udala imvilophu eyodwa.
Lesi sithonjana sobuhle sasigubha esikhathini esidlule ngabanye abantu. IBhayibheli linikeza ubufakazi obungenakuphikwa bokuthi ubuhle obumnyama babukade buhlelisiwe (isib. IsiHlabelelo seziHlabelelo eBhayibhelini: "Ngimnyama futhi ngimuhle" noma iNdlovukazi uShaba).
Ukuzethemba kwakho kutholakala ngokubuka kwabanye. Uma ukubuka kwamadoda amnyama kwabesifazane abansundu kuthembekile, kuhloniphekile, kunesibopho (kwezenhlalo, kwezomnotho, emndenini, ngokwamasiko ...), ukwazisa nokunakekela, akungabazeki ukuthi lokhu kuzosiza ukwenza ubuhle obumnyama bukhanye futhi emhlabeni. [Wpdiscuz -feedback id = "4a1m3gu9sd" question = "Ucabangani wena? »Kuvuliwe =» 1 ″] [/ wpdiscuz-feedback]
I-Sakkas 2188 - I-Lelisa Long Asymmetric Ruffle Jumpsuit enezikhwama ze-Wax yase-Afrika i-Ankara ...
Okusha okungu-2 kusuka ku- € 40,99
Thenga i- € 40,99
Kugcine ukubuyekezwa ngoJanuwari 23, 2021 1:30 am
Umsuka kanye nokufanekisa kwembali yokuphila
Incwadi Yokuphila Yama-Ascended Masters (PDF)
Ungazihlanza kanjani izinso zakho ngokwemvelo